NEWS – Winner Global Logistics
၁။ Myanmar Companies Online (MyCO) စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ www.myco.dica.gov.mm တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ။
၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား စာရွက်စာတမ်းဖြင့် ရုံးတွင်တင်ပြလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ပုံစံအား ဖြည့်စွက်၍ ယူဆောင်လာရပါမည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို www.dica.gov.mm သို့မဟုတ် www.myco.dica.gov.mm မှထုတ်ယူဖြည့်သွင်းပါ။
၃။ ကုမ္ပဏီ အသစ်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်းလျှောက်ထားလွှာများ ပုံစံ (က) အုပ်စုနှင့် ကုမ္ပဏီ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် လျှောက်ထားလွှာများပုံစံ (ခ) အုပ်စုတို့အား စာရွက်စာတမ်းဖြင့် ရုံး တွင်တင်ပြလိုပါက သီးခြားဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရပါမည်။
၄။ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား Online စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေအပြင် မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမျှ ထပ်မံပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ Online စနစ်ဖြင့် အသုံးပြု မည်ဆိုပါက ပိတ်ရက်မရှိတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ သီးခြား ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်မည့်အစား Myanmar Companies Online (MyCO) စနစ်ကို အသုံးပြု၍ မိမိအိမ် သို့မဟုတ် ရုံးတွင်သာသက်တောင့်သက်သာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
Dr. Myo - Logistics
လယ်ယာ သီးနှံ ထုတ်ကုန်များ မြစ်ကြောင်းအသုံးပြုပို့ဆောင်မှု နှင့် Logistics ကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြည်တွင်း မြစ်ကြောင်းလမ်းများကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ် (Transport Cost) နဲ့ ထောက်ပံ့ ဖြည့်ဆည်း စီမံ ဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ် (Logistics Cost) တွေကို အတော်များများ လျော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
ဒါဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ ကိစ္စ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး . . .
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား ရမယ့် ကိစ္စ တစ်ခုပါ . . .
နိုင်ငံရဲ့ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ တိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော့လိုပဲ အမျိုးမျိုး တွက်ချက် စဉ်းစားထားကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိကြမယ်ဆိုတာ အထူးယုံကြည်ပါတယ် . . .
ကျွန်တော် အဓိက ဆွေနွေးထားတဲ့ အချက်တွေကတော့
(က) ပြည်တွင်းသွား မြစ်တွင်း ဆိပ်ကမ်းတံတားများ (Inland Waterway River Jetty) ဖြည့်တင်း တည်ဆောက်ခြင်း
(ခ) လယ်ယာထွက်ကုန် အထောက်အပံ့ပြု နိုင်ငံတစ်ကာ ကုန်စည် တင်ပို့/ တင်သွင်း နိုင်သည်အထိ ပို့ဆောင်/ သယ်ယူ/ သိုလှောင်/ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် နိုင်ငံ တကာ ဆက်စပ် မြစ်တွင်း ဆိပ်ကမ်း တံတားများ (International River Terminal) စီမံ တည်ဆောက်ခြင်း
(ဂ) Logistics Cost ကို လျော့ချနိုင်မည့် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်ပြီး ဘေးကင်း လုံခြုံ စနစ်ကျသော မြစ်တွင်းသွား ကုန်တင် ရေယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်း
အဲဒီ (၃) ချက် အပြင် နောက်ထပ် (၃) ချက် ကိုလည်း အနည်းငယ် တို့ ထိ ဆွေးနွေးထားပါတယ် . . .
ဖတ်ရှု့ ပေးကြပါဦးခင်ဗျား . . .
PDF file ကို Dr. Myo - Logistics Group မှာ တင်ထားပါတယ် . . .
Download ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .
တစ်မျက်နှာချင်း ဖတ်ရှု့နိုင်ဖို့လည်း image ပုံအနေနဲ့ တင်ထားပေးပါတယ် . . .
စုစုပေါင်း (၁၈) မျက်နှာ ရှိပါတယ် . . . ... See more
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ စတင်အာဏာတည်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် Myanmar Companies Online (MyCO) ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ၁၉၁၄ သို့မဟုတ် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီ အက်ဥပဒေတို့နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော တည်ဆဲကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၆ လ ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် စနစ်သစ် (MyCO) တွင် သတ်မှတ်ပုံစံ နည်းလမ်းများ အတိုင်း ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကြပါရန်နှင့် ဤသို့ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အခကြေးငွေ ပေးသွင်းရန် မလိုကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၅/၂၀၁၈ ... See more
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့ကျစေရန် ကုန်သေတ္တာယာဉ်များကို ကားလမ်းကြောင်းမှ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု လျှော့ချပြီး မြို့တွင်းရေလမ်းကြောင်းမှ သယ်ယူရန် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက်မည်
သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် - - - >>> http://news-eleven.com/news/54551 ... See more
ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ/ လစာနှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန်နှိုးဆော်ခြင်း ... See more
အခွန်တိမ်းရှောင်ရန် အားထုတ်ခြင်းများကို အရေးယူရန် ခုနစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်နှင့် ငေ
အခွန်တိမ်းရှောင်ရန် အားထုတ်ခြင်းများကို အရေးယူရန် ခုနစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်ကျခံစေရမည်ဟု အ... ... See more
Topmost Learning and Service Provider
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေအား သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ပြန်။
https://pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/urHMUU_10.%2020180323%203%20page%2023Taxation%20%20Law%20substitute%20(Repair).pdf ... See more
can i buy viagra in spain where i live, can i buy viagra in spain where i live, can i buy viagra in spain where i live, Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. can i buy viagra in spain where i live, can i buy viagra in spain where i live, can i buy viagra in spain where i live Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. .